၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် DV ကံစမ်းမဲ လျှောက်နိုင်ပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Events/Fundraise » ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် DV ကံစမ်းမဲ လျှောက်နိုင်ပြီ
Posted by manawphyulay on Oct 4, 2012 in Events/Fundraise | 28 comments
“လျှောက်လွှာ လျှောက်ထားတဲ့သူက ဒီလျှောက်လွှာနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြင်ဆင်တာမှန်သမျှ ကိုယ်တိုင် လုပ်လို့ ရတဲ့စံနစ်မျိုးဖြစ်အောင်ကျမတို့ စီစဉ်ထားတာပါ။ ဘယ်အေးဂျင့်ဆီကိုမှ သွားပြီး ပိုက်ဆံ ပေး စရာ မလိုသလို လျှောက်ဖို့လည်း ပိုက်ဆံတပြားမှ ကုန်စရာ မလိုပါဘူး။ ကိုယ်အရွေးခံရတယ်၊ မရဘူး ဆိုတာကို Website မှာ ကိုယ်တိုင်စစ်ကြည့်လို့ရတယ်။ ဒီတော့ လျှောက်လွှာတင်တဲ့သူက အမြဲတမ်း ကိုယ့်အတွက်ကိုယ် လိုက်ကြည့်နေရတာမျိုးတော့ ဖြစ်ပါတယ်။”
“အဲဒီတုန်းက ကျနော် စစ်ထဲမှာလေ။ အဲမှာမှာ ကျနော့်ညီမဆီက သူ့ကို ချက်ခြင်း ဖုန်းဆက်ပါဆိုပြီး အမှာစကားရလိုက်တယ်။ အဲဒီတော့ သူ့ဆီပြေးပြီး ဖုန်းဆက်လိုက်တာ ကျနော် ဂရင်းကဒ် ပေါက်တယ် လို့ သိရတယ်။ ဝမ်းသာသွားတာဗျာ- အဲဒါနဲ့ ကျနော် တပ်ထဲကထွက် အိမ်ပြန်လာတယ်။ အိမ်မှာလည်း အမေရိကားကိုသွားဖို့ စာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံ ရောက်နေပြီလေ။ ကျနော် ခုနစ်ရက်လောက်ကို ပွဲခံပစ်လိုက်တယ်ဗျာ။”
“ကျနော် ကံကောင်းမယ်ထင်တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေကတည်းက ကံကောင်းနေတယ်လေ။ ဒီတခေါက်က ကျနော် မဲပေါက်မှာဗျ။ ကျနော်က ဘွဲ့လည်းရပြီးသား၊ အိမ်ထောင်လည်းရှိတယ်။ အလုပ်လည်းရှိတယ်။ ဒီတော့ ကံကောင်းပြီဆိုရင်လေးခုတပြိုင်တည်းလာတာမဟုတ်လား။ သုံးခုနဲ့ပဲ ရပ်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။”
အီရန်နွယ်ဖွား ကနေဒါက မာဆာရီက –
“ကျနော် တော်တော်ကြာကြာကို တွေဝေနေခဲ့ပါတယ်။ ငါးနှစ်တောင် ကြာသွားခဲ့တာ။ ငါးနှစ်ပြည့်မှပဲ အားလုံးကိုချ၊ သေချာထိုင်စဉ်းစားပြီး နောက်ထပ် ငါးနှစ်၊ ဆယ်နှစ်မှာ ဘယ် အနေအထား ရောက်နေ ပြီလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်မိတယ်။ အဲဒီနောက် ၁၂ နှစ် ကြာတဲ့အချိန်မှာတော့ ကျနော် ဂရင်း ကဒ်ပေါက်ခဲ့တာကို သိပ်ကျေနပ်မိရပါတယ်။ ကျနော့ဘဝ လုံးဝကို ပြောင်းလဲသွားတာပါပဲ။”
ဘာရယ်တော့မဟုတ်ဘူး … စိတ်ဝင်စားတယ် … အရင်ကသူများတွေလျှောက်တာတွေ့ဖူးပါတယ် … အခုလို အပြင်ထွက်စရာမလိုပဲ လျှောက်လို့ရတော့ ကံစမ်းကြည့်ဦးမယ် ……..
ဟုတ်တယ် အရင် စာအိတ်လေး တွေ နဲ့ စာတိုက် က ပို့ပြီး လျှောက်ကြရတာ ထိ မှတ်မိနေသေးတယ်။
I think Luck is about 1 to 150 ratio but all should do.
မနောရေ information အတွက်ကျေးဇူးပါနော်..
တခါမှတော့ မလျှောက်ဖူးသေးဘူး… ဒီနှစ်တော့ကံစမ်းလိုက်အုံးမယ်…
ရွာသူားထဲက..မဲ ပေါက်သူရှိရင်.. မေးစရာရှိတာ.. မေးနိုင်ပါတယ်ဗျို့..
မေးချင်လို့ပါရှင်… တကယ်လို့ ပေါက်ပြီးသားက ကန့်သတ်ကာလကျော်သွားရင် ပေါက်ထားတဲ့နံပါတ်နဲ့ သံရုံးကိုပြန်တင်ရင်ကော ရနိုင်ပါသလားဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲဆိုတာလည်း ပြောပြပေးစေလိုပါတယ်။
အဲဒီပထမအဆင့်မှာ..သတင်းပို့မှ.. ဒုတိယအဆင့်ဆက်သွားလို့ရတာမို့လို့.. ထင်ပါတယ်..။
အဆင့်တွေ အကုန်အောင်ပြီး သွားရမယ့်ဒိတ်ကျော်နေရင်ကော ရပါသေးသလား။ ပြန်ရ မရလည်း သိချင်ပါတယ်။
ပြသနာ မရှိပါ၊ လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပေါက်မဲနံပါတ်ကို ကနဦး အကျိုးဆောင်ခ အမေရိကန်ဒေါ်လာတရာတိတိ နဲ့အတူ ဗိုလ်ကြောင်ကြီး၊ ပင်တဂွန် စစ်နှာထချုပ်၊ ဝါရှင်တိန် ဆိုပြီး လိပ်မူပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
ဒိတ်ကျော်နေရင် ဖိတ်ခေါ်ပွဲဆော့ရပါတယ်ကွယ်။ သိပ်အော်လွန်းရင်တော့ ထိပ်ပေါ်တက်လွန်းတယ်လို့ မြင်သွားနိုင်ပါတယ်။ အနှိပ်ရှော်လို့ အိပ်ပျော်မိပါတယ်လို့ ဆင်ခြေတက်တဲ့အခါ ဟိတ်တော်စမ်းလို့ ပိတ်ဆော်ခံရနိုင်ကြောင်းပါ။
ဦးကြောင်ကြီးပြောမှပဲ ရှင်းသွားတော့တယ်… ဒီဗီကလည်း ပိုက်ဆံအတော်ကုန်တယ်ပြောတယ်ရှင့် ဟုတ်ပါသလား။
ကိုခိုင်ရေ..မေးလို့ရတယ်ဆို ၁ခု ၂ခု လောက်မေးချင်ပါတယ်…. ရဲစခန်းထောက်ခံစာအပြင် ထောင်ထောက်ခံစာရော ယူရသေးလား… interview မှာရော ဘာတွေမေးတတ်သလဲ…ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် လေးတွေသိရင် ပြောပြပါ…
ကျောင်းသားဗီဇာနဲ့လာသူတွေက.. ယူအက်စ်ရောက်ရင် နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့်တင်ဖို့.. ထောင်ကျဖူးကြောင်းထောက်ခံစာ ယူကြတယ်လို့ထင်ပါတယ်..။
အင်တာဗျုးကတော့.. အဲဒီနား ဘားလမ်းတလျှောက်(နိုထရီလုပ်ရင်း)စုံစမ်းရင် ဘာတွေမေးတတ်လည်း သိမှာပါ..။
ယူအက်စ်က.. ဟိုးးးးအရင်နှစ်ရာချီကတည်းက.. ဥရောပကနေ.. သဘောင်္နဲ့ဝင်လာတဲ့.. လူတွေကိုအမေရိကားမှာ နေထိုင်ခွင့်ပေးရာမှာ.. အခြေခံပညာရေး..ဂဏန်းပေါင်းနှုတ်လောက်တော့.. မေးပါတယ်..
ဆိုလိုတာက.. သာမန်လူတွေ.. အမေရိကားလာေ၇ာက်နေထိုင်တာ.. မလိုချင်ပါဘူး..
တလောက ကြားမိတာ ယူအက်စ်ကောင်ဆယ်လိတ်ရုံးမှာ အင်တာဗူးတဲ့သူတွေက မြန်မာစကား ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြောတတ်ဆိုဗဲ။ မြန်မာလိုမေးတယ်တဲ့၊ အင်္ဂုလိလို နည်းနည်းပါးပါး စစ်ကောင်းစစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဥမပါ – အမည်၊ အသက်၊ ဘယ်မြို့ကိုသွားမှာလဲ၊ ဘယ်သူရှိလဲ၊ ဘာလုပ်သလဲပေါ့။ ကိုယ်က နားလည်မလည်နဲ့ ပြန်ပြောနိုင်မပြောနိုင်လောက်ပဲ စစ်မှာပါ။ သာမာန်စာကြောင်း၊ စာပိုဒ်လောက်ကိုလည်း အသံထွက် ဖတ်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ အခက်အခဲ တွေ့တယ်ဆိုရင် ” နိုးနိုးယူဘစ်ကက် မစ္စတာကြောင်ကြီး အက်ဖ်ဘီအိုင် ” လို့ ညည်းသလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ ပြောလိုက်ပါ။ တခါထဲ ပြီးသွားစေရမည်။
တို့ကတော့် လျှောက်ပြီးသွားပြီ ၂ ရက်နေ့ ကတည်း က စမ်းကြည့်နေတာ ၃ ရက်နေ့ကျမှ လျှောက်လို့ရတယ်..။
If you win the green lottery in 2011, the last date of entry to the US is 30 September 2012. If you don’t know your winning , US Embassy will inform you by phone but I don’t know how many times they call you. The process time in US Embassy takes about six months. After that they will give you six month visit visa you and your family. But carefully notice you must enter US before 30 September 2012 .Similarly, If you win 2012 lottery , You must enter US before 30 Sep 2013. But family members can enter US any time before end of six month visit visa . After arriving the US port of entry, they will change your status and wait about one month for green card and Social Security card. All documents must be true . Green card is PR card. SS card is essential for working, studying, banking etc.
အသက် ၁၈နှစ်အောက်သားသမီးတွေရှိတဲ့မိသားစုလိုက်လျှောက်တာတွေပေါက်တာတော်တော်တွေ့တယ်. ပထမနှစ်အစ်မ၀မ်းကွဲမိသားစု ကလေး ၅ယောက်နဲ့ပေါက်တယ်..နောက်နှစ်အသိမိသားစုပေါက်တယ်. မနှစ်ကတော့ ဆေးကျောင်းတက်နေတဲ့မောင်ဝမ်းကွဲလေးပေါက်တယ်. ကလေးတွေပညာရေးအတွက်တော့ အရမ်းကောင်းသွားတာတွေ့တယ်. အသက် ၂၁နှစ်အောက်ကတော့မိဘအောက်ကပဲလျှောက်ရတယ်. ၂၁ကျော်ရင်တော့သီးသန့်လျှောက်ရတယ်.
ခရစ်စတယ်ဂလေးကရော ဘယ်လိုလျောက်မှာလဲ…။ သီးသန့်လား၊ မိဘအောက်ကလား..။ ဘဲဇုတ်ဘဲနာဂျီးနဲ့၊ အတွယ်အတာတွေနဲ့တော့ မဟုတ်တန်ကောင်းပါရဲ့…။
ကယ်ကယ်ကြောင်ရယ်..မီးမီးကမသွားချင်လို့မလျှောက်ပါဘူးရှင်. သူများကအနောက်မသွားပါဘူးရှင် အရှေ့အရပ်ကိုသွားမှာပါ. :harr:
DV ပေါက်ရင်လည်း သိန်း၃၀ လောက်ကုန်တယ်ဆို အဲဒါ ဟုတ်ပါသလား ၇ှုင့်..။ နောက်ပြီး English မကောင်းရင် ရော သွားလို့ရပါ့မလား..။
သိသလောက်တော့.. (အနည်းဆုံး) လေယဉ်ခ(ရန်ကုန်-အမေရိကား) လက်မှတ်ဖိုးနဲ့.. ယူအက်စ်မှာနေဖို့.. တလ အိမ်လခ+အသုံးစရိပ် ၈၀၀-၁၀၀၀ ၆လစာလောက်ပါလာမှဖြစ်လိမ့်မယ်..။
၁၅၀၀+၆၀၀၀ = ဒေါ်လာ ၇၅၀၀ ကတော့ သေချာပေါက်ရှိမှပါ…။
အင်္ဂလိပ်စာကို.. အေဘီစီဒီ.. CAT ကက်ထ်.. ကြွက်.. အဲ. ကြောင်လောက်သိတဲ့.. မြန်မာပြည်မှာ ၁၀တန်းလောက်တော့ အောင်ထားရမယ်ထင်ပါကြောင်း.
( ပိုသိသူတွေ.. ရေးပေးစေလိုပါတယ်နော…)
လျောက်ပြောနေ… အားအားယားယား သူ့အိမ်မှာ ဖင်ထိုင်ခုံမရှိတိုင်း…။ ဒေါ်လာ၇၅၀၀ ရှိမှ လာဂျေးဆို သဂျီးအမျိုးတွေပဲ လာနိုင်ကြမယ်။
တစ်ယောက်တည်းဆိုရင် ဟိုမှာလည်းအလုပ်မရခင်စပ်ကြားအလကားကပ်နေလို့ရမယ့်အိမ် မရှိဘူးဆိုရင် အဲလောက်တော့ကုန်လိမ့်မယ်. လေယာဉ်၊ ဆေးစစ်တာ နဲ့ဗီဇာကြေးတင် ၂၀၀၀ လောက်ဖြစ်နေပြီးလေ.. အဲဒါတောင်ဗီဇာကြေးကမနှစ်ကလျော့လိုက်လို့.အစ်မတွေ သွားတုန်းက တစ်ယောက် ၄၀၀ကျော်တယ်. Greencard နဲ့ SS Card ရဖို့ကတော့ စတိတ် အလိုက်ကွာလာလားမသိဘူး. NY မှာကတော့နေထိုင်စားရိတ်များပေမယ့် အများဆုံး၁လအတွင်း အဲဒါတွေရတယ်ပြောတယ်. တစ်ယောက်တည်းဆိုသူများနဲ့လိုက် ရှဲ နေရင်တောင်အိမ်လခက တစ်လ ၅၀၀အနည်းဆုံးပဲ. မိသားစုလိုက်ဆိုရင်အခန်းလိုက်ငှားရတော့ deposit တင် ၇၀၀၀ထောင်ကျော်လောက်ပေးရတာ. ရွာသူားတွေပေါက်လို့စာအိပ်တွေရလာရင် ဖောင်ပြန် တင်ရတယ်..ဟိုကလူခံတစ်ယောက်ယောက်လိပ်စာဖြည့်ရတာဆိုတော့ လူခံမရှိရင် MG လိပ်စာဖြစ်ဖြစ်ဖြည့်လိုက်ပါ :harr: ပိုက်ဆံလည်းယူလာစရာမလိုပါတဲ့ ကယ်ကယ်ကြောင်က သူ့အိမ်တင်ကျွေးထားပြီးအလုပ်လည်းရှာပေးမှာတဲ့. အလုပ်ရမှာ တလ ၁၀၀နှုန်းပြန်ဆပ်ပေါ့
ရင်းရင်းနှီးနှီး ဦးလို့ခေါ်ပါ ခရစ်စတယ်ဂလေးရယ်… ကယ်ကယ် ကယ်ကယ်နဲ့ တစိမ်းဆန်လွန်းပါတယ်။ တကယ် အရေးအကြောင်းရှိ ကျား ကျားဆိုမှ ဦးကြောင် လာမကယ်နိုင်ဘဲ ဖြစ်သွားမယ်…။
မသွားခင် ကုန်တာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ပထမပေါက်ပြီဆိုတာနဲ့ စာပြန်တင်လိုက်ပြီး ဒုတိယစာပြန်ကျချိန်ပြီးမှ သံရုံးမှာ ချိတ်ဆက်ပြီး သွေးစစ်တာ အရင်ကတော့ ဒေါ်လာ ၁၂၅ ကျပါတယ်။ နောက်သံရုံးအင်တာဗျူးဝင်ဖို့ ထပ်ကုန်ပါတယ်။ နောက် သွားမယ့်မြို့မှာ ထောက်ခံပေးမယ်သူက တစ်နှစ်နေထိုင်ခွင့်ရှိပြီးသူ နိုင်ငံသားဖြစ်ရပါမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ သိတဲ့သူတွေလည်း ပြောပြပေးကြပါဦး။
If the chineses want to go to US illegally , they have to pay about U$ 70000 in cash or debt travelled by ships.
India, Bangladesh, Pakistan and Chinese are not entitle to participate the US lottery according to their population in US. One more thing, I would like to say, As I mention above it, Some of so called Rohinjar nationals
( Bangali ) transit from Myanmar and go to Thailand, Malaysia and other countries.
– ချိုင်းနီးစ်တွေ ဂရင်းကဒ်ရဖို့အတွက်.. ဒေါ်လာ၁သိန်းလောက်အကုန်အကျခံကြတယ်လို့.. ကြားဖူးပါတယ်..။ မြန်မာတွေမှာတော့ လွယ်လွယ်ရတာမို့.. တန်ဖိုးသိပ်မသိကြပါ..။
– ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက.. အရင်နှစ်တွေတုံးက.. ဒီဗီကိုတာအများဆုံးတောင်ရဖူးခဲ့တာပါ..။
အခုတော့.. အမေရိကားအစိုးရက.. ဘန်းလိုက်ပါပြီတဲ့..(အောက်ကသတင်းရှု့ )
Bangladesh Banned From DV Lottery 2013 | Tech Desighn
by Ahsanul Karim – in 959 Google+ circles – More by Ahsanul Karim
Sep 22, 2011 – The people of Bangladesh will not participate the latest DV-2013 Lottery program. On 22nd September, 2011 U.S. government announced …
– ဘင်္ဂလီတွေဟာ.. မြန်မာနိုင်ငံကို.. ကြားခံအဖြစ်အသုံးပြုပြီး.. ကုလသမဂ္ဂကအသိအမှတ်ပြုတဲ့.. ဒုက္ခသည်စခန်းဝင်. မြန်မာအဖြစ်နဲ့.. တတိယနိုင်ငံတွေကို.. သွားကြပါတယ်..။
ဒါကို လွန်ခဲ့တဲ့.. ၄-၅နှစ်လောက်ကတည်းက အမေရိကားအစိုးရက သတိထားမိသွားတာမို့.. ရပ်ထားလိုက်တယ်လို့ သိထားပါတယ်..။ ဥရောပတခြားနိုင်ငံတွေကတော့.. တော်တော်ကြာတဲ့အထိ.. သတိထားမိပုံမပေါ်ပါ..။
သမ္မတဘုရှ် သူ့သမ္မတသက်တန်းပြီးခါနီးမှာ မြန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ်သွားပြီးနောက်.. ခရစ်ယန်ပြောင်းခိုသူတွေကိုသာ အဓိကထားခေါ်ခဲ့တဲ့.. အဖြစ်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်.။
Applicants may access the electronic DV Entry Form (E-DV) at http://www.dvlottery.state.gov during the registration period. Paper entries will not be accepted. We strongly encourage applicants not to wait until the last week of the registration period to enter. Heavy demand may result in website delays. No entries will be accepted after noon, EDT, on November 3, 2012.